Kuedza Linux: PendriveLinux | Linux Vakapindwa muropa
Isu tinoramba tichiongorora dzimwe nzira dzekuyedza Linux uye kusafa tichiedza, tiri kuenda neimwe nzira iyo isingazosiya kukuvara kwechibatiso pamushini wako kana ukazvitumira iwo madhaka. Kazhinji kuita rudzi urwu rweyedzo tinoshandira kuLiveCDs, ayo ari maCD atinoisa mukombuta kuitira kuti vatange pakutanga, dambudziko navo rinomuka nekuti sekufunga kwako, hatigone kuchengetedza chero chinhu pavari uye zvakanyanya, isu CD / DVD yekupinda inobatikana saka hatigone kana kushandisa iyo chikamu kuona firimu kana kuteerera kumhanzi.
Iwe unorangarira yekutanga yekutyaira madhiraivha ayo akatengeswa zvakanyanya? Aive akadhura kwazvo, kungoshandisa pa32 kana 64 megabyte kwaidhura zvakanyanya tichienzanisa neCD zvekuti kubva pakuona kwangu yanga isingakoshe. Asi nhasi, pendrive? zvakachipa zvakachipa, kutaura zvazviri, muzvitoro zvakawanda nhasi zvinyoreso zvinotyaira zvisingasviki 1 GB hazvitengeswe uye zvekupedzisira zvinodhura zvisingasviki madhora gumi (zvakati wandei). Ndine maviri, pamwe ne mp10 uye microSD yandiri kufunga kuchinjira imwe nyowani; zvandinoreva ndezvekuti izvi zvemapenduru uye nekurangarira ndangariro mune zvakawandisa nhasi chinhu chekushandisa nekurasa.
MuLinux, LiveCDs dziri kupa kukwirisa pendrives, ivo vanogona kubhootisa iyo system voga uye kune mavhezheni eanenge chero chero kugoverwa kweLinux kunowanikwa kuboot zvakananga kubva kwavari, zvisinei, zvese zvinogoverwa hazviitwe kuti zvishandiswe seizvi, zvimwe zvakakura kwazvo uye ivo vanokwana chete mune akakurisa, nepo vamwe vanopedza USB ndangariro nekunyora nekunyora pairi nguva dzose.
pendrivelinux Inogona kuve imwezve yeanogovaniswa akagoverwa, asi, sekutaurwa kwezita rayo, inomira pamusoro pevamwe mune chimwe chinhu: Yakaberekerwa izvi. pendrivelinux Iyo yakavakirwa paMandriva, imwe yeaya "anotanga" kugoverwa, inoitwa kuti igadziriswe nyore nyore, isina ruzivo rwakawanda, uye inoshanda.
Chikamu chefilosofi yangu yekublogi inoti mune yake yechina chinyorwa, chidimbu 36 "Kana uchizotaura nezve chimwe chinhu, edza kunge wakambochimboedza, ndapota", apo ini ndisingawanzo kuve nematambudziko; Ndakaedza PendriveLinux uye ini ndinogona kuti zvinoshanda, zvine huta asi zvinoshanda.
Kana komputa yako iri yemazuva ano uye ukashandisa Vista kana XP, zvirokwazvo uchashamisika kuti PendriveLinux inomhanya zvakadii pamushini wako ichibva mu USB memory. Indaneti? Kana iwe ukashandisa modem yakadaro DHCP, iwe ungangobatana neInternet chete (usina kana kubvunza uye usina makiyi kana mapassword).
Sezvo isu tiri kutaura nezve USB tsvimbo uye zano nderekuwedzeredza kushandiswa kwenzvimbo (kana iwe ukaona saizi yehofisi yandinoshanda mauri waizoziva zvandiri kutaura nezvazvo), chero chinhu chisina kukosha zvakanyanya kana chiyero chinofanirwa kuve isa parutivi. Nechimwe chikonzero chisina kujeka, kubatana kweInternet hakuna kumbobvira kwashanda paPC yangu (nekuda kwechimwe chikonzero cheupenzi ndinogunun'una nezvekusagona kuishandisa neLinux pamushini), asi iko Indaneti kwaisashanda chero kwaive nekabhuku kemukoma wangu ne Wifi kubatanidza (FayerWayer, WayerLess, rimwe zuva ndichagadzira WayFay (asi kutanga vamwe venyu muchaba pfungwa yangu uye muzviite pamberi pangu)). Kubatana kweWi-Fi kunondibvunza kuti ndigadzirise kadhi riine «ndiswrapper», mutyairi watichataura nezvayo kwekanguva.
Ini pachangu ndinofunga kuti, kuwedzera uye kubvisa, izvo "zvinopesana" padhuze nezvakanaka uye mukana wekuyedza mabhenefiti eLinux, hapana kwekurasika. Kana iwe waida kuyedza izvi, enda kuchitoro chiri padyo, tenga imwe yeaya 1GB pendrives uye uikumikidze kuyedza izvi.
Edza Linux nePendriveLinux (2008 vhezheni)
Chekutanga zvinhu kutanga, dhawunirodha iyo faira ine iyo yekugovera. pendrivelinux2008.
Paunenge uinacho, buritsa zvirimo mupendrive.
Tsvaga iyo faira "makeboot.bat" (nekuti ndinofungidzira urikushandisa Windows) uye unomhanya nayo. Izvi zvinoita kuti pendrive yako ikwanise kubhodhi komputa gare gare
Zvino tangazve komputa yako uye pinda iyo BIOS neF2, F11, Del kana inoenderana kiyi paPC yako, zvakasiyana mune ese uye inowoneka pachiratidziri paunongobatidza komputa.
Tsvaga sarudzo inonzi "Bhoot" uye iwe unowana zvirokwazvo runyorwa rweako hard drive, CD-ROM uye pendrive. Gadzira iyo pendrive yekutanga pane iyo rondedzero, chengetedza uye kubuda imomo.
Sezvauchaona, iyo system ichatangazve, ichisiye yega kuti pendrive yako, kana isina kana dambudziko, inofanira kunge iri kutanga PendriveLinux.
Iyi inofanirwa kuve nzira yakanakisa yekuyedza Linux, asi kune zvimwe. zvinogoneka edza iyi imwecheteyo system pasina kutangazve Windowsndiko kuti, uchishandisa zvese zviri zviviri zvakafanana. Ipfupi Zvese Mune Imwe PendriveLinux 2008 uye uteedzere nhanho dziri pamusoro asi USATE reboot, pachinzvimbo mhanya "qemu.bat". Kana PC yako iine huwandu hwakaringana hwe RAM haufanire kunge uine matambudziko ekumhanya uye kushandisa PendriveLinux mukati meWindows, kunyangwe hazvo, iri shomashoma pane yapfuura nekuti haishande muVista uye haugone kushandisa iyo USB drive kubva paWindows uchiri uchishandisa PendriveLinux nekuti unogona kushatisa iyo system system uye kubuda pendrive.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Kuedza Linux: PendriveLinux
kuyedza kuyedza makomendi
Ini ndinofanira kukorokotedza Administrator wenzvimbo ino nezano rakanakisa relinuxeros, windowseros uye nei zvisingaiti, isiri-linuxeros ...
Kune zvangu zvekudya, uye izvozvi ndiri kugadzirira kupinda kublog rangu rekuparadzira izwi nezvesaiti ...
Kumbundira uye chengeta yakadaro!
Iyo bachi, kukwidziridzwa kunogamuchirwa, uye ndinovimba unoramba uchidzoka.
Kubva pane zvandiri kunzwisisa (uye kusimbiswa) unogona kuisa chero Linux distro pane pendrive. Iwe unongofanirwa kuvhura iyo ISO yeiyo distro mukati mepeni uye ndizvozvo. Kunyange zvakadaro mu: http://www.pendrivelinux.com/ pane zvidzidzo zvekuisa chero distro pane pendrive
@Pablo: Ehe ichokwadi, asi PendriveLinux yakagadziridzwa yakanangana neizvi, ini ndatozvitaura izvo mune iyo posvo.
zvakanaka, parizvino kune akawanda anorarama cd cd (mbwanana, slax) iyo inouya kuzotakurwa mu RAM uye vanokusiya iwe wakasununguka kurekodha kubvira ipapo paunomhanyisawo mumachini asingabhure kubva kuUS
Zvakanaka, ndakawana zvese zvataurwa pano, ini parizvino ndine iyi vhezheni inomhanya pane yangu 6Gb flash, asi ndine kusahadzika kunotevera, ndinogona kuteedzera emunhu mafaira mune dhairekitori uko ndangariro yakaiswa pasina chinhu chakakuvadzwa, mukati meiyi folda pane pendrivelinux mafaera, ndinotaura izvi nekuti mu / kumba zvarinondiudza ndezvekuti ini ndine izvi chete:
[muenzi @ localhost muenzi] $ df -h
Fileystem Saizi Yakashandiswa Kuwanikwa Shandisa% Kwakaiswa pamusoro
/ dev / mudzi 144M 1.3M 142M 1% /
/ dev / hda1 85G 58G 28G 68% / mnt / win_c
/ dev / hda2 8.5G 8.1G 386M 96% / mnt / win_d
/ dev / sda1 5.6G 754M 4.9G 14% / mnt / win_e
Kana paine munhu akamboedza izvi, ndapota nyorera kwandiri pa 433411@gmail.com
Pindura kuna fdvalero
Inoshanda chaizvo, asi muChirungu…. Ngatione kana paine chero usb distro muSpanish
Pindura kuna norbulinux